Tilmaamaha Kheyraadka Coronavirus iyo Hoylaawe - Wadashaqaynta Tucson Pima si loo joojiyo Hoylaawe
Coronavirus iyo Kheyraadka hoylaawe
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay - Maarso 25, 2021
Hagahan haga waxaa loogu talagalay in lagu siiyo macluumaad waxtar leh adeeg bixiyayaasha hoyga hoylaawayaasha, guryaha ku-meelgaarka ah, xarumaha la-tago, iyo adeegyada kale ee guri-la'aanta ah si looga caawiyo diyaarinta iyo ka-hortagga faafitaanka COVID-19 ee Gobolka Pima.
TALLAALADA 19-KA EE COVID-XNUMX OO LOO HELI KARO DADKA CAAFIMAADAYA GURIGA
Laga bilaabo Maarso 25, 2021, dhammaan dadka ay la soo daristo hoy la'aantu hadda waxay xaq u leeyihiin inay helaan tallaalka COVID-19 ee Gobolka Pima.
Booqo www.tpch.net/beyondcovid wixii macluumaad ah ee ku saabsan xulashooyinka tallaalka iyo jadwalka.
U yeerida dhamaan u doodayaasha guri la'aanta ah - naga caawi sidii aan u faafin laheyn - isqor si aad u noqoto Safiirka Talaalka Guri la'aanta TPCH!
Booqo www.tpch.net/ambassador Wixii macluumaad dheeraad ah.
Joog ilaa taarikhda
TPCH Isku Xidhka-19 Diyaarsanaanta & Jawaab-celinta Saldhigga: TPCH waxay u abuurtay Kooxda Basecamp guryeynta iyo adeeg bixiyaasha hoylaawayaasha ah si ay ula wadaagaan aaladaha, ilaha, iyo macluumaadka ku saabsan COVID-19, istaraatiijiyooyinka loo adeegsado u diyaargarowga iyo ka jawaab celinta, iyo isbeddelada ku dhaqanka iyo hababka maxalliga ah. Basecamp wuxuu siiyaa gole xubnaha TPCH si toos ah ay ula xiriiraan una wadaagaan macluumaadka waqtiga dhabta ah. Ku soo biir Basecamp halkan. Aqoon u lahayn Basecamp? Fiiri qoraalkan kooban barashada fiidiyaha.
Cusbooneysiinta Maalmaha Caafimaadka Bulshada ee Degmada Pima: Waaxda Caafimaadka Pima County waxay soo daabaceysaa casriyeyn fiidiyoow maalinle ah oo diiradda lasaaray ugu horreyntii cusbooneysiinta coronavirus. Cusbooneysiinta fiidiyowga waxaa laga daawan karaa Gobolka Pima Kanaalka Youtube.
XAALADAHA GURYAHA-19 EE LACAG-GELISTA SIYAASADDA GURYAHA-KA-BILAASHKA SIYAASADDA (5.20.20)
Iyada oo laga jawaabayo dhibaatada caafimaad ee COVID-19, TPCH waxay hirgelisay istiraatiijiyad deg deg ah oo deg deg ah iyo siyaasad gelitaan ku-meel-gaar ah oo Isuduwidda ah. Nidaamkani wuxuu ka kooban yahay oo beddelayaa hagitaankii hore ee ku-meel-gaarka ahaa ee ay soo saartay TPCH wuxuuna beddelayaa Xeerarka iyo Nidaamyada Gelitaanka Isku-dhafan ee TPCH.
Dib u eeg TPCH COVID-19 Istaraatiijiyadda Guriyeynta Degdegga ah iyo Siyaasadda Galitaanka Ku-meelgaarka ah ee Ku-meelgaarka ah.
PIMA COUNTY RELEASES GUute wuxuu ku siinayaa Tilmaanta Socdaalka Kiraystayaasha
Waxa ay Kireysteyaashu u baahan yihiin in ay ogaadaan inta lagu jiro COVID-19 - Ingiriis
Waxa ay Kireysteyaashu u baahanyihiin in ay ogaadaan inta lagu jiro COVID-19 - Isbaanish
DIIWAANGALINTA MACLUUMAADKA EE COC, ESG, iyo HOPWA BARNAAMIJYADA
Laga soo bilaabo Abriil 1, 2020, HUD waxay soo saartay taxane xusuus qor ah iyo ogeysiisyo qeexaya dhaafitaanno sharciyeed oo laxiriira Sii-socoshada Daryeelka (CoC), Mashruuca Banaanbaxa ee Guri La'aanta Dhalinyarada (YHDP), Deeqaha Xalka Degdega ah (ESG), iyo Fursadaha Guriyeynta ee Dadka qaba HIV Barnaamijyada AIDS-ka (HOPWA).
Diisambar 29, 2020 Xusuusin Ku dhawaaqista Helitaanka Ka-dhaafitaan Dheeraad ah ee Mashaariicda CoC iyo YHDP
Abriil 1 Xusuusin Ku dhawaaqista Helitaanka Ka-dhaafitaannada Shuruudaha Qorshaha La Isku-daray iyo CoC, ESG, iyo Barnaamijyada HOPWA
Heshiiska Meey 22 ee Ku Dhawaaqaya Ka-dhaafitaan Dheeraad ah ee Barnaamijyada CoC, YHDP, ESG, iyo HOPWA
Juunyo 22 Is-bedbeddelka iyo Ka-dhaafitaannada ay Bixisay CARES Act iyo Megawaiver Guidance
Sebtember 1 Ogeysiiska ESG-CV
Sebtember 30 Xusuusin Ku dhawaaqida Ka-dhaafitaan Dheeraad ah ee Barnaamijyada CoC, YHDP, iyo ESG
Iyada oo laga jawaabayo dukumiintiyadan hagidda HUD, Xafiiska Deegaanka ee IX HUD Qorshaynta & Horumarinta (CPD) Xafiiska Goobta wuxuu soo saaray tilmaamo ku saabsan soo gudbinta ogeysiisyada ka-dhaafidda. Dadka qaata CoC, ESG, iyo HOPWA waa inay u soo diraan ogeysiis qoraal ah oo la xiriira isticmaalka ka dhaafitaannada ugu yaraan 2 maalmood ka hor intaan la bilaabin isticmaalka. Ogeysiisyo qoraal ah waa in lagu siiyaa shaxanka la ansixiyay oo lagu soo diraa emaylka CPD_COVID-19WaiverSFO@hud.gov. Copy Eric.f.christensen@hud.gov iyo tpch@tucsonaz.gov dhamaan gudbinta dhaafka.
La cusboonaysiiyay 1 / 6 / 21: Soo dejiso naqshada ogeysiiska dhaafitaanka IX ee gobolka halkan.
Soodejiso shaxanka HUD lagu taliyay ee duubista kaafiska halkan.
TPCH waxay martigelisay webinar markay ahayd Oktoobar 6, 2020 si ay u bixiso aragti guud ee ka-dhaafitaanka sharciyeed ee barnaamijyada CoC, ESG, iyo HOPWA oo ay ku jiraan tilmaamaha hay'adaha hoose ee doonaya inay adeegsadaan ka-dhaafitaannada iyada oo loo marayo Magaalada Tucson, Pima County, iyo Waaxda Arizona ee Amniga Dhaqaalaha.
Fiiri webinar la duubay halkan.
Soo dejiso webinar slide deck halkan.
XAALADA DEGDEGGA AH
Aasaaska Beesha ee Koonfurta Arizona- COVID-19 Sanduuqa Taageerada Bulshada: waxay siisaa ilo jajabnaan ah ururada u adeegaya shaqsiyaadka iyo qoysaska ay saameysay COVID-19. Macluumaad dheeri ah ama si aad u buuxiso arjiga kooban ee lacagaha, booqo CFSA website.
Aasaaska Beesha ee Koonfurta Arizona- COVID-19 Sanduuqa Gargaarka Dhacdooyinka Aan-Fursada ahayn: waxay bixisaa kaalmo hal-mar ah 501 (c) (3) ururro, heer wanaagsan, ku saleysan iyo ka shaqeynta sadaqada degmada Pima County ama Santa Cruz County. Macluumaad dheeri ah ama si aad u buuxiso arjiga kooban ee lacagaha, booqo CFSA website.
Maamulka Ganacsiga Yaryar ee Mareykanka- Barnaamijka Ilaalinta paycheck waa amaah loogu talagalay in lagu bixiyo dhiirrigelin toos ah ganacsatada yar yar si ay shaqaalahooda ugu sii hayaan mushaharka. Macluumaad dheeri ah ama si aad u buuxiso arjiga kooban ee lacagaha, booqo SBA website.
TILMAAMAHA IYO XULASHADA
TPCH waxay wadashaqeyn dhow la yeeleysaa saraakiisha caafimaadka iyo la-hawlgalayaasha bulshada si ay uga caawiyaan bixiyeyaasha adeegyada hoylaawe ah jawaabta COVID-19. TPCH waxay ku dhiirrigelineysaa dhammaan bixiyeyaasha hoyga, hoyga ku-meelgaarka, iyo goobaha kale ee lagu kulmo inay dib u eegaan ilahaan, iyo sidoo kale inay sii wadaan inay dib ula eegaan Waaxda Adeegyada Caafimaadka ee Arizona. website heerka coronavirus ee dalka Mareykanka ee ku saabsan xaaladda COVID-19 ee gobolkayaga iyo Xarumaha Xakameynta Cudurrada bogga on COVID-19 ee xaaladda coronavirus ee Mareykanka.
Macluumaadka deegaanka iyo hagista waxaa laga heli karaa Waaxda Caafimaadka ee Degmada Pima website.
Gobolka Arizona iyo 211 Arizona waxay iska kaashadeen sidii loo bilaabi lahaa khadka tooska ah ee 'COVID-19' si looga jawaabo su'aalaha dadweynaha laga qabo agabyada bulshada, tijaabinta, astaamaha, iyo arrimo kale oo la xiriira COVID-19. Ka wac 2-1-1 taleefan kasta oo Arizona ah si laguugu xiro ama loo booqdo www.211arizona.org caawimaad.
FIIRO GAAR AH: Waqtigan xaadirka ah, waxaan si adag ugu boorineynaa hoyga hoylaaweyaasha iyo bixiyeyaasha adeegyada kale inay furnaadaan, iyadoo wax laga beddelayo gaarsiinta adeegyada iyo hirgelinta tillaabooyin lagu yareynayo faafitaanka bulshada ee COVID-19.
Soo Koobid Kheyraadka Dalka
Cudur faafa iyo Diyaarsanaanta Bixiyaha (Webinar)
COVID-19: Adeegyada Muhiimka u ah Isqorista Inta lagu guda jiro Cudurka Cudurka Faafa (HUD - 23-Mar-2020)
COVID-19: Maareynta Hoyga Inta Uu Jiro Cudur Faafa (HUD - 23-Mar-2020)
COVID-19: Sida Loogu Tijaabiyo Macaamiisha Markay Gelitaanka Hoyga Ama Xarumaha Fursadaha (HUD - 23-Mar-2020)
COVID-19: Hawlgelinta Milkiilaha: Dib u soo noolow Wada-shaqeynta Cilmiga Bulshada ee Dhexdeeda Muddada ay Cadeyntu Jawaab bixinayso (HUD - Meey 15, 2020)
Daryeelka Caafimaadka Qaranka ee Golaha Hoylaawe ah (Webinar la duubay)
Coronavirus iyo Daryeel Caafimaad oo loogu talagalay Bulshada Hoylaawe ah
Coronavirus iyo Boostada Guri la'aanta (la cusbooneysiiyay)
Tilmaanta Ururka Caafimaadka ee Reer Miyiga:
Maxay Bixiyeyaasha Guriyeynta u Baahan Yihiin Inay Ogaadaan
Habka Kaydinta Qiimaha Daryeelka Caafimaadka Arizona (AHCCCS) Hanuuninta shakhsiyaadka daboolay Medicaid iyo liistada khadadka kalkaaliyeyaasha 24-ka saacadood ah ee qorshuhu ahaa
Qeybta Adeegyada Caafimaadka ee Arizona Talooyinka Caafimaadka Dadweynaha
Waaxda Qalabka ee Cudurrada Cudurrada Cudurka Faafa ee Waaxda Guryaha Mareykanka iyo Horumarinta Magaalada
Waaxda Guriyeynta Mareykanka iyo Horumarinta Magaalooyinka ayaa daabacday xirmo aaladaha cudurada faafa ee adeeg bixiyaasha hoylaawe ah, oo ay ka mid yihiin a qalab oo loogu talagalay bixiyeyaasha hoyga. Qalabkaani wuxuu qeexayaa tillaabooyin muhiim ah oo muhiim u ah hoyga badbaadintu ay qaadi karto sida hirgelinta tallaabooyinka ka-hortagga fayadhowrka, iyadoo la adeegsanayo siyaasad feejignaan feejignaan ah oo lagu garto cudurrada neefsashada ee xilli hore, su'aalaha baarista caafimaadka iyo hab-raacyada, talooyin ku saabsan hirgelinta dhaqanka go'doominta, talooyin ku saabsan goorta dadka guryaha loo keenayo isbitaallada. ama bukaan socod eegtooyinka oo u aqriyaan hoyga, iyo macluumaadka tababarka shaqaalaha.
Maareynta Faafida Cudurka Infekshinka ah ee Dadka Dhibaataysan Hoy la’aanta
Maareynta Faafidda Cudur Infekshinka ee Guryaha Hoyga
Maareynta Faafidda Cudurka Infekshinka ee kujira Iskuulada
Tilmaamaha Xarunta Xakameynta iyo Ka Hortagga Cudurrada (CDC) iyo agabka Caawinta Farsamada ee HUD (TA)
Hagaha Ku-meelgaarka ah ee Hoyga Guri-laaweyaasha
Dadka khibradda u leh hoy la’aan
Nadaafada Deegaanka iyo Talobixinta Beerka
CDC: Tilmaanta ku-meel-gaarka ah ee Adeeg Bixiyeyaasha Hoylaawe si ay u Qorsheeyaan ugana Jawaabaan Cudurka Coronavirus 2019 (COVID-19)
CDC: Nadiifinta Bey'ada ee Ku-meelgaarka ah iyo Faafinta Kala-goysyada Degmooyinka Bulshada Mareykanka ee Cudurka Coronavirus ee Looga Shakiyey / Xaqiijiyay 2019 (COVID-19)
CDC: Tilmaanta COVID-19 ee Iskuulada iyo Xannaanada Ilmaha
CDC: Kalahadalida caruurta ku saabsan Cudurka Coronavirus 2019 (COVID-2019)
Su'aalaha lagu Caawinayo CoCs iyo Maamulka Caafimaadka Dadweynaha si loo Xaddido Faafida Cudurka faafa ee barnaamijyada hoy la'aanta ah
Tixgelinno Gaar ah oo Loogu Sameynayo Maamulka Caafimaadka Dadweynaha si loo Xaddido Khatarta Cudurka Infekshinka ee ka dhex dhaca Dadka la kulma hoy la’aan
U-qalmitaanka kharashyada ESG ee Diyaarsanaanta Cudurrada Cudurrada
Adeegsiga Lacagaha Barnaamijka CoC ee loogu talagalay Diyaargarowga Cudurrada Cudurka Faafa iyo Jawaabta
Hagaha Deg-deg ah ee Waxqabadka Uqalma ee CDBG ee lagu Taageerayo Jawaabta Cudurka Cudurka
Qoysaska iyo shaqsiyaadka la soo deristay hoy la’aan waxay u nugul yihiin cudurada faafa sababta oo ah helitaanka daryeelka aasaasiga ah, dhaqdhaqaaqa, iyo xaalada caafimaad xumo ee ka dhaceysa marxaladaha guri la'aanta. HUD waxay si adag u dhiirigalinaysaa Jinsiyadaha Daryeelka (CoCs) inay la xiriiraan waaxyaha caafimaadka dadweynaha ee maxalliga ah, Daryeelka Caafimaadka ee wakaalada guri-laaweyaasha, iyo la-hawlgalayaasha kale ee caafimaadka deegaanka si loo hubiyo in baahiyaha gaarka ah iyo fursadaha la xiriira nidaamka adeegga guri-laawayaasha ay ku jiraan. CoCs waxay qaadi karaan talaabooyin hada ay ku hormarinayaan u diyaar garowga iyo qorshooyinka waxqabadka si looga hortago cudurka.
Kheyraadka HUD si joogto ah ayaa loo cusboonaysiiyaa loona dhejiyaa HUD khatarta ah ee isdhaafsiga cudurada iyo hoy la'aanta hoy... mHUD sidoo kale waa la heli karaa si ay u bixiso kaalmo farsamo bixiyeyaasha kaalmada guryo la’aanta ah ee u baahan taageerada ka hortagga ama ka jawaabida faafitaanka cudurrada faafa. Fadlan u gudbi su'aalahaaga Weydii Su'aal (AAQ) portal. Tallaabada 2-aad ee habka gudbinta su'aasha, ka xulo "CoC: Sii wadida Barnaamijka Daryeelka" ka "Su'aashaydu waxay la xiriirtaa" hoos liiska liiska oo ku qor "Diyaargarowga Caafimaadka iyo Jawaabta" khadka maaddada.
Daryeelka Caafimaadka ee Qaranka ee Hoylaaha hoy la'aanta ah ee Kheyraadka Coronavirus Resource Page
Daryeelka Caafimaadka Qaranka ee Golaha Hoylaawe ah ayaa soo uruuriyay a dejinta ilo waxtar leh on COVID-19, oo ay la socdaan tilmaamahooda ku caawinaya daaweynta iyo ka hortagga faafitaanka ifilada safka ah.
Isbahaysiga Qaranka ee Soo afjaraya Coronavirus Blog
Isbaheysiga qaran ee lagu joojinayo hoy la’aanta ayaa daabacay blog on COVID-19, oo ay ku jiraan isku xirka webinar taasi waxay dhici doontaa Maarso 10 markay tahay 3:00 pm.
Ka sokow agabkan, hoyga iyo adeeg-bixiyeyaasha kale ee hoy-la'aantu waa inay sii wadaan qaadista tallaabooyin ka-hortag maalinle ah si looga caawiyo joojinta faafitaanka jeermiga sababa dhammaan cudurada, oo ay ku jiraan ifilada iyo coronavirus:
Hubso in shaqaaluhu iyo deganeyaashu badanaa gacmaha ku dhaqaan saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 sekan. Haddii saabuun iyo biyo aan la heli karin, isticmaal gacmo nadiifiye alkolo ku saleysan.
Ku dhiiri geli shaqaalaha iyo dadka deegaanka inay ka fogaadaan taabashada indhahaaga, sankaaga, iyo afkaaga gacmo dhaqdaan.
Hubso in unugyadu jiraan, kuna dhiirrigeli shaqaalaha iyo deggeneyaasha inay ku daboolaan qufacooda ama hindhisto unug, ka dibna ku tuur unugyada qashinka.
Ku dhiiri geli shaqaalaha inay joogaan guriga markay jiran yihiin.
TPCH waxay sii wadi doontaa inay siiso cusbooneysiin iyo ilo dheeraad ah sida loogu baahdo coronavirus (COVID-19) xubnaheena iyo bixiyeyaasha adeegyada hoyga. Waad ku mahadsan tahay waxkasta oo aad sameysid maalin kasta si aad u hubiso caafimaadka iyo wanaaga dadka ay la soo deristay hoy la’aanta ka jirta gobolkeena!
Tusaalooyinka Dukumintiyada & Talooyinka Adeegyada ee Bulshooyinka Kale
Qalabka Keenista Macaamiilka ee COVID-19: Atlanta, GA CoC Tusaalaha (HUD - 15-Mar-2020)
Fayadhowrka iyo Tilmaanta Nadaafadda ee Bixiyeyaasha Adeegyada Hoylaawayaasha
Qalabka Qiimeynta Fayadhowrka iyo Nadaafadda Xarumaha Maalmaha, Hoyga, iyo Dhismooyinka
Tilmaanta Ku-meelgaadhka ah ee Degmada King King - COVID-19 Bixiyeyaasha Adeeg-guri la'aanta ah (la cusbooneysiiyay 3.12.20)
COVID-19 - Tilmaamaha degdegga ah ee loogu talagalay waxa hoy u ah iyo barnaamijyada kale ee hoylaaweyaasha u baahan yihiin inay ogaadaan (waa la cusboonaysiiyay 3.6.20)
Tilmaanta Baxnaaninta Guryaha ee Qoysaska iyo Shakhsiyaadka ku Nool Guryaha Taageerada Joogtada ah (la cusboonaysiiyey 3.6.20)
COVID-19 Qorshaynta Diyaarsanaanta (la cusbooneysiiyay 3.6.20)
Tilmaamaha Fasaxidda COVID-19 (la cusbooneysiiyay 3.12.20)
Tilmaanta ku-meelgaadhka ah ee Sida Loo Daryeelo Qof qaba Calaamadaha Lagu Waafajiyo COVID-19 (la cusbooneysiiyay 3.12.20)
Tilmaamaha Coronavirus ee isku-duwidda dhismayaasha dhismayaasha
Diyaarinta COVID-19 bogagga webinar ee shaqaalaha wacyigelinta
Tusaalayaasha Diyaarinta Qorshayaasha Hoyga iyo Bixiyeyaasha Adeegyada:
Qorshaha diyaarinta CELID-19 ee Beth-El Center
Qorshaha diyaarinta South Park Inn ee COVID-19
Tusaalooyinka muunad ah ee Adeegyada La dhimay ama Wax Laga Beddelay:
Ogeysiiska Xarunta-Dhexe ee 'Bet-El' oo ku saabsan maraqa jikada
Ogaysiiska Adeegyada Bulshada ee Xoriyadda